I-China inkqubo yoNyango lwaManzi abavelisi kunye nabathengisi | IVEN
Unyango lwaManzi aMayeza - iPW / WFI / PSG
Ukubuyela umva kwi-osmosis ngamashumi asibhozo aphuhlise itekhnoloji yokwahlula inwebu, ethi isebenzise ikakhulu umgaqo wokungena kwe-membrane, ukuyinika indlela ethile ngokufaka uxinzelelo kwicala lokungena kwendalo ngokuchasene namandla amanzi kwisisombululo esixineneyo singxenga isisombululo sokungena Ngale ndlela ibizwa ngokuba yi-reverse osmosis. Ngamacandelo esixhobo ukubuyisela umva i-osmosis iyunithi yokubuyisela umva osmosis.
Inye, ezimbini ezibuyela umva kwi-osmosis + yokulungiselela i-EDI (inkqubo yokuhlanjululwa kwenkqubo yamanzi)
1 Ilungele ityuwa yamanzi eluhlaza ekwafaniswa imimandla yokuphakama;
Ukuqhutywa kwamanzi kwimveliso kubhetele;
Utyalo-mali lwe-3 ngexesha elinye elingaphantsi;
4 iindleko zokusebenza eziphantsi;
Isivuno samanzi (m³ / h)
Ubuncinci bamanzi (m³ / h)
Amanzi amtyuba (%)
Lobushushu Working (℃)
Umvelisi womphunga ococekileyo
1.Yenziwe ngokwemiqathango yeJB20031-2004 I-Steam Generator eQinisekileyo, umvelisi wethu we-LCZ ococekileyo usebenzisa ubushushu bomphunga ukuvelisa umphunga osulungekileyo ngaphandle komthombo wobushushu. Umvelisi uyasebenza kwenzalo kwaye unokuthintela ungcoliseko lwesibini olubangelwa sisinyithi esinzima, umthombo wobushushu kunye nezinye iimfumba ezingcolileyo. Izixhobo zibonakaliswa bubuchwephesha obuphambili, uyilo oluyingqayizivele, ulwakhiwo olumbeneyo, ukumiliselwa kwengqondo kunye nokulondolozwa kobushushu kwigobolondo, okuzisa ilahleko ephantsi yobushushu, ukusebenza ngobushushu okuphezulu, indawo encinci yokugubungela, ukusebenza ngokulula kunye nofakelo kunye nokulungelelaniswa okuhle. Umvelisi wethu uyayithobela imiqathango kaRhulumente ye-GMP kwaye isetyenziswe ngokubanzi kwinzalo kwezonyango, kumayeza nakumashishini okutya.
2. Icandelo lecandelo: umthombo wamanzi kunye nenqanaba lokucoca itanki yamanzi
Itanki ifudumeza amanzi asuswe ngumphunga kwibhoyila ukuze ivelise umphunga osulungekileyo. Isifudumezi kunye ne-evaporator yetanki yamkela ityhubhu engenamthungo yentsimbi engenamthungo kunye nokudlulisa ubushushu. Itanki inokulungelelanisa ngokuzenzekelayo ukungena kwamanzi ngokobushushu bomphunga kwibhoyila ukuze kunyuswe imveliso yomphunga omsulwa. Ukongeza, umphunga wokucoca okuphezulu kunye noxinzelelo lwasemva olwahlukileyo kunye namanqanaba okuhamba anokufumaneka ngokulungisa iveluve yokuphuma.
3. Esi sixhobo sifumaneka ngeendidi ezintathu, okt i-automation epheleleyo, i-semi-automation kunye nokusebenza ngesandla ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abohlukeneyo.
Ukuveliswa komphunga ococekileyo（L / h）
Ukufudumeza ukusetyenziswa komphunga（kg / h）
Ukusetyenziswa kwamanzi okucocekileyo（kg / h）
I-1400 × 950 × 2700
I-1500 × 1050 × 2900
I-LD ye-multi-effect distillator yamanzi yenzelwe kwaye yenziwe ngokwemiqathango ye-GB150-1998 ye-Steel Pressure Vessel kunye ne-JB20030-2004 ye-Multi-effect Distillator yamanzi. Onke amacandelo kunye nezixhobo zenziwe nge-304 okanye i-316L ngentsimbi engenasici. Amanzi afakwe kwi-distillator yamanzi asulungeke kakhulu kwaye awunamthombo wobushushu, ohambelana ngokupheleleyo nazo zonke izikhombisi ezisemgangathweni zamanzi ngenaliti echazwe kwi-Chinese Pharmacopoeia (uhlelo luka-2010). Esi sixhobo singqineka silukhetho olufanelekileyo kubavelisi bamayeza anje ngeemveliso ezahlukeneyo zegazi, inaliti, kunye nezisombululo zokufakwa, iiarhente zebhayoloji kunye nokusela amanzi afakwe amanzi.
1. Esi sixhobo sifumaneka ngeendidi ezintathu, okt i-automation epheleleyo, i-semi-automation kunye nokusebenza ngesandla ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabasebenzisi abohlukeneyo.
2. I-distillator yamanzi eneziphumo ezingaphezu kwesithandathu ayifuni ukongeza amanzi okupholisa.
Isivuno samanzi (L / h)
ukusetyenziswa komphunga (kg / h)
ukusetyenziswa kwamanzi okrwada (kg / h)
ulwandlalo lobukhulu (mm)
Amanzi acociweyo Inkqubo yoNyango ye-EDI
1.Reverse osmosis luhlobo lwetekhnoloji yokwahlula inwebu ephuhliswe ukusukela nge1980s.
I-2.Isebenzisa ikakhulu umgaqo osmosis ukuba inwebu ebonakalayo engacacanga. Uxinzelelo olubizwa ngokuba yi-reverse osmosis.
Isixhobo esenziwe ngamacandelo okubuyela umva osmosis kuthiwa sisixhobo esibuyela umva osmosis.
I-osmosis yamabanga aphantsi kunye nasesekondari + EDI
1.Applied kwiindawo apho ubutyuwa bamanzi eluhlaza buphezulu;
2.Ukuqhuba kombane okuhle kwamanzi okuvelisiweyo;
I-4.i-low cose yokusebenza;
1. Uyilo lokumodareyitha, ubumbano lwakhiwo.
2. Inkqubo inokukhetha i-thermal disinfection RO inwebu kunye ne-thermal disinfection EDI; yonke le nkqubo uyakwazi ukubona on-line amanzi ashushu iintsholongwane.
3. Isithambisi esiphindwe kabini sinokufikelela kunxibelelwano kuthotho ngokusebenzisa iqela levalve kunye nokuzala kungenjalo.
4. Yondla impompo yamanzi.
5. Inkqubo yemveliso yamanzi engapheliyo isebenzisa iindlela ezimbini zonikezelo
6. Sebenzisa itanki yokugcina amanzi njenge tanki yesixhobo sokuqonda ukucoca kwi-intanethi, ukuhambisa inkqubo eyahlukileyo yokucoca.
7. Ukwenza ityhubhu yentsimbi engenamsebenzi ngokuthe ngqo ukugoba kumbhobho kangangoko kunokwenzeka, kuphephe ukuwelda.
8.Ukunxibelelana kombhobho kunye nezahlulo, isebenzisa i-arc ukukhusela umkhondo we-welding oluzenzekelayo, kunye nokuqinisekisa umgangatho we-welding
9. Inkqubo yolawulo: PLC iteknoloji yolawulo oluzenzekelayo
Imowudi yokurekhoda: Unokukhetha isishicileli esingena phepha kwiirekhodi ezingenamaphepha kunye nephepha lokurekhoda iiparameter eziphambili ngexesha lokwenyani.
Ukuveliswa kwamanzi (m3 / h)
Ukuhamba kwamanzi ubuncinci (m3 / h)
Amanzi aChwekiweyo (%)
Ukusebenza kobushushu bamaqondo (° C)
Egqithileyo Igumbi elicocekileyo
Okulandelayo: Itanki yokugcina
Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer,